Moblile World Congress edition 2017 | ECommerce nhau
Moblile World Congress edition 2017
Isu tangori mazuva mashoma kubva ku Chinyorwa cha2017 cheMobile World Congress iyo ichaitika kubva muna Kukadzi 27 kusvika Kurume 2 muBarcelona. Iyi ndiyo inonyanya kukosha tekinoroji yakanaka maererano netekinoroji uye nhare mbozha umo kufambira mberi kwese kunoratidzwa mune izvi kuchapihwa.
Pakati penyaya dzinozobuda pachena gore rino pane dziya dzine hukama ne matekinoroji anosimudzira zvemagetsi zvekutengeserana uye m-commerce.
Kana iwe uchifunga kuenda Moblile World Congress edition 2017 Tinokurudzira kuti iwe ushanyire aya mapaneru ku zadzisa kudzidziswa kwako segore muzvinabhizimusi:
1 • Chitoro:
2 Kuita Maapuro:
3 • Kutanga chinowedzera chinongedzo:
4 Tarisa uone:
5 Emotion Yekutsvaira Lab:
Tend chishandiso chakakumikidzwa kugovaniswa kwemamaki online zvinyorwa uye ine huvepo munyika makumi matatu nemashanu. Kana iwe uchitsvaga inoshanda nzira yekutora zvigadzirwa zvako uye kukwidziridzwa kune vanhu vazhinji, ino inzvimbo yako.
Iyo ikambani yakatsaurirwa kuita shanduko mhinduro kune gore kumakambani. Iyo sarudzo yakanaka kune varidzi veSME vanofanirwa kuve nekambani yavo data uye ruzivo zvakachengeteka uye zvirinyore zvirinani chero ivo vari.
• Kutanga chinowedzera chinongedzo:
Iyo ikambani yakazvipira kubatsira kukura kwemakambani ari kubuda nekupinda kune zvavanoda chaizvo kuburikidza ne6-mwedzi wekudzidzisa chirongwa. Izvo zvakanaka kana iwe uine zano uye urikutsvaga nzira dzekuishandisa.
Iyo ikambani inopa chikuva chekuongorora chiitiko chevashandisi. Inokupa iwe nematurusi akasiyana ayo anokutendera iwe kunyatso tarisa yako yekuvavarira vateereri kuitira kuti iwe ugone kuwedzera kutengesa kwako uye kuhwina vatengi vatsva.
Emotion Yekutsvaira Lab:
Iyo kambani inotsvaga kubatsira mabhenji kuti varambe varipo mune chinangwa chevatengi vavo. Inopa sevhisi iyo inokutendera iwe kuyera manzwiro evatengi vako munguva chaiyo. Ipa mhinduro dzisingachinjiki uye gadzira marongero ekuita kuti vatengi vako vanzwe kufara, kuteerera, uye kutungamirwa kuita chiito.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zviitiko » Moblile World Congress edition 2017
BlogsterApp, inogadziridza ako masocial network
Kuvimbiswa ne selfies, wedzera chengetedzo neyakajeka yako